शेयर मार्केटमा जमेका यी दृष्टिविहीन युवा, जसको ‘पोर्टफोलियो’ करोडभन्दा माथि
संघर्ष सँगसँगै सफलता
नेप्से परिसूचक आज यति अंकले बढ्यो, घट्यो ! शेयर बजारमा हरियाली, राताम्मे ! यस्ता समाचार हरेक दिन सुनिरहन्थे उनले । नेप्से भन्ने के रहेछ भन्ने उनलाई विद्यालय तहबाटै जिज्ञासा र उत्सुकता थियो तर पढाइप्रति बढी ध्यान हुँदा शेयर/नेप्से बुझ्नतिर लागेनन् । पढाइमा ध्यान दिए ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–८ प्रदीपनगरका दृष्टिविहीन मुकुन्द चालिसेले २०६३ सालमा पूर्वाञ्चल ज्ञानकक्ष विद्यालय सुनसरी धरानबाट ८ कक्षा पास गरे । जहाँ दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरू मात्र पढ्थे ।
९ कक्षा पढ्न २०६१ सालमा आफ्नै गृहनगरको तिलोत्तमाको शान्ति नमूना माविमा भर्ना भएका उनले २०६३ सालमा एसएलसी परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उनी पोखरा गए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ नेपाली विषय लिएर प्रविणता प्रमाणपत्र तह (आईएड) पढ्न थाले । क्याम्पसको छात्रावासमा मुकुन्दसँगै बसेर पढ्ने साथी शोभाखर ढकाल पढाइसँगै बैंकका जागिरे पनि थिए ।
कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन भएको साथीले थाहा पाएका रहेछन् । आईपीओको लागि फर्म भर्न शोभाखरले काम गर्ने बैंक तोकिएको थियो । त्यो बेला अहिलेजस्तै मोबाइलबाटै मेरो शेयरमार्फत आईपीओ भर्न मिल्ने सहज व्यवस्था थिएन । बैंकमा गएर लामो लाइनमा लागेर फर्म भर्नुपर्थ्यो ।
सानैदेखि शेयर बजारप्रति चासो राख्दै आएका चालिसेलाई साथीले शेयर भर्नुपर्छ भनेपछि उनी पनि १०० कित्ता शेयर भर्न साथीसँगै बैंकमा गए । १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नो चासोको क्षेत्र शेयर बजारमा उनले पहिलो पाइला चाले ।
त्यसपछि उनले शेयर बजार के हो, कसरी प्रवेश गर्नेदेखि लगानीबारे सोधखोज र समाचार बुझ्दै गए । अध्ययन गर्न थाले । त्यससँगै दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट) बारे बुझे ।
नेपाल टेलिकमले राम्रो बोनस दिन्छ । कम्पनी राम्रो छ भन्ने सुनेपछि उनले टेलिकमको ४१८ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दर १०० कित्ता शेयर उठाएर सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गरे । २०६७ सालमा शेयर बजारमा प्रवेश गरेको सामान्य परिवारका दृष्टिविहीन ३२ वर्षीय मुकुन्दको शेयरमा अहिले ‘पोर्टफोलियो’ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । अहिले उनी बुटवल क्षेत्रका शेयर बजारका लगानीकर्ताभित्र ‘टप’मध्ये एक भएका छन् । शेयर बजारलाई बुझेर लाग्नेका लागि मुकुन्द प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् ।
कन्ट्री बैंकको शेयरपछि निष्कासन भएका सबै हाइड्रो, बैंक, लघुवित्त, ऊर्जा लगायत क्षेत्रका संस्थाहरूमा आईपीओ भर्दै गए मुकुन्दले । बुवाले पढाइ खर्चको लागि दिएको पैसा बचाएर शेयरमा लगानी गर्थे । दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेर किनेको टेलिकमको शेयर ४१८ रुपैयाँमा किनेर केही महिनापछि घाटा खाएर ४०८ रुपैयाँमा बिक्री गरे उनले ।
तर उनले शेयर बजारमा किनबेच गर्न छाडेनन् । उनलाई घरबाट पनि साथ रह्यो । उनले अहिले शेयर बजारमा उज्ज्वल भविष्य देखेका छन् ।
‘म यसैमा सन्तुष्ट छु । शेयर बजार भनेको स्वच्छ कारोबार हो । जहाँ राज्यलाई कर तिरेर खरिदबिक्री गरिन्छ । शेयरमा लागेपछि खासै गुमाउनुपरेको छैन,’ उनले भने ।
उनी नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ रूपन्देहीका संयोजक पनि हुन् । ‘मैले घरमै बसीबसी शेयरबाटै ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गरिसके । अहिले पनि मेरो शेयरमा १ करोडभन्दा बढीको ‘पोर्टफोलियो’ पुगिसकेको छ । किन्ने बच्ने क्रम जारी छ । बुझेर/जानेर शेयरमा लाग्दा राम्रो छ,’ मुकुन्द भन्छन् ।
शेयर बजारमा सानो पुँजी लगानी गरेर पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । थोरै पुँजीबाट लगानी गर्न सकिने भएकाले सबै उमेरका लागि लाभदायक छ । अझ युवामा जान्ने इच्छा, जाँगर तथा उमेरको हिसाबले पनि युवा लगानीकर्ता शेयर बजारमा आउनु राम्रो हुने चालिसे बताउँछन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) अपाङ्गमैत्री नभएका कारणले अफलाइन कारोबार गर्छन् । अनलाइन कारोबार गर्न टीएमएसमा कोल्याट्रल लोड गर्न र अन्य फिचरहरू चलाउन समस्या हुने गरेको मुकुन्द बताउँछन् ।
उनी आईपीओ भने आफैं भर्न सक्छन । शुरूशुरूमा न्युजहरू सुनेर कम्पनीबारे जानकारी प्राप्त गर्ने चालिसे अहिले प्रविधिको विकास भएसँगै आएका विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनको सहयोगमा सूचीकृत कम्पनीहरूको आधारभूत विश्लेषण गर्छन् । प्राविधिक विश्लेषण गर्न आफूलाई सम्भव नभए पनि प्रविधिको सहयोगले कम्पनीको आधारभूत अध्ययन गर्न पाउँदा मक्ख छन् । राम्रोसँग विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने हो भने शेयर बजारबाट आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था रहेको चालिसेको विश्वास छ ।
‘शेयर बजारमा छिर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताले कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणको राम्रो अध्ययन गर्नु जरूरी हुन्छ । प्रतिशेयर आम्दामी, रिजर्भ, पीई रेसियो लगायत आधारको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘शेयर बजारमा लगानी गर्नुपूर्व धैर्यताको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । यसरी धैर्यतालाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने लगानीकर्ता बढी आत्तिने गर्छन् । आफूले हालेको कम्पनीमा होल्ड गर्न सक्नुपर्छ । पोर्टफोलियो बनाएर कारोबार गर्ने गर्नुपर्छ ।’ मुकुन्दले शेयर बजारमा १० वर्षे अनुभव लिइसकेका छन् ।
चालिसे परिवारका जेठा छोरा हुन् । मुकुन्दले अहिले आमा, पत्नी, छोराछोरी र २ भाइको पनि आईपीओ गराउने गरेका छन् । ‘आईपीओ सबैले भर्छन् । शेयरको दोस्रो बजारमा म मात्रै छु । भाइलाई पनि यसैमा सिकाउँदैछु,’ उनले भने ।
स्नातक उत्तीर्ण उनी शिक्षक सेवा आयोगका केही परीक्षामा पनि सहभागी भए तर उनले अब शेयर बजारलाई छाड्दैनन् । विभिन्न कठिनाइलाई चिर्दै व्यावसायिक जीवनमा प्रवेश गर्दाका असंख्य भोगाइहरू छन् उनीसँग । अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको बजार प्रणालीमा शेयर खरिद–बिक्री गर्नका लागि धेरै झन्झट व्यहोर्नुपरेको नमिठा कठिनाइ चालिसेसँग छन् तर अहिले उनले भौतिक रूपमा आँखाले नदेखे पनि केहीमा कमजोर छैनन् ।
‘म दृष्टिविहीन भएर दुःखी पनि छैन, कमजोर पनि छैन,’ चालिसे भन्छन् । उतिबेला आईपीओ खरिद गर्ने स्थानसम्मको लामो यात्रा, घण्टौ बस्नुपर्ने लाइन, फारम भर्नुपर्ने चुनौती र फारममा हस्ताक्षर गर्नेले मात्र आईपीओ खरिद गर्न पाउँछ भन्ने जस्ता नमिठा व्यवहारबाट आहत भएका अनुभवहरू मुकुन्दले संगालेका छन् ।
आईपीओमा आवेदन गर्नबाटै वञ्चित भएको अवस्थालाई चिर्दै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा विजयको अनुभव गर्छन् चालिसे । दोस्रो बजारमा कारोबार गरी राफसाफ गर्न हस्ताक्षर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ल्याप्चेमार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ता काठमाडौ नै धाउनुपर्ने बाध्यताले पनि हतोत्साही पारेको थियो उनलाई ।
‘शेयर बजारमा एकैदिनमा धेरै कारोबार गर्न तम्सिनुहुन्न । एकैचोटी झ्याप्पै धनी हुने चाहना गर्‍यो भने शेयर बजारमा पैसा फस्ने तथा डुब्ने खतरा बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुँजीबजारमा नबुझी प्रवेश गर्ने ९० प्रतिशत व्यक्ति असफल र १० प्रतिशत मात्र ‘सक्सेस’ रहेका छन् ।’ उनले आफूलाई १० प्रतिशतभित्र पार्न सफल भएका छन् ।
‘थोरै पैसाबाट लगानी गर्ने र बिस्तारै अरु पैसा पनि चलाउने गर्नुपर्छ । शेयर किन्दा विभिन्न कम्पनीमा पैसा हाल्नु उचित हुन्छ । एउटै कम्पनीमा धेरै रकम लगानी गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । अहिले शेयर बजारमा धेरै मानिसहरू नबुझिकन प्रवेश गरेको उनको ठम्याइ छ ।
अहिले मुकुन्द दृष्टिविहीनलाई पनि शेयर बजारमा प्रवेश गराउन पहुँच अभिवृद्धिमा जुटेका छन् । अहिले पूर्ण दृष्टिविहीन ६० जनाभन्दा बढी शेयर बजारमा प्रवेश गरिसकेका उनी बताउँछन् । शेयर बजारमा भएका विकृतिलाई नियमन गरेर स्वच्छ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सामाजिक उद्यमशीलता विकासका निम्ती नबिल बैंकले शुर...
सिभिल बैंकले मनायो ११ औं वार्षिकोत्सव, विविध कार्य...